Ikhaya leholide kwindawo yokusila yamanzi, ecaleni kwengxangxasi kunye nedama lokuqubha lendalo
Le ndlu ibekwe eForcella. Kukho amagumbi okulala ama-2 ewonke anokuhlala abantu aba-4. Ilungele ukuhlala kosapho. Indlu ijikelezwe yindalo kwaye isecaleni kwengxangxasi.
Ungandwendwela ihlathi elikumgama we-100 m ukuba uhambe kwaye uhambe. Indawo yokutyela ene-multi-cuisine kunye neevenkile zokubonelela ngokubanzi zikwi-5 km kude. Ungakonwabela ukuzola kokusingqongileyo kufutshane nechibi elikumgama wama-500 m.
Indlu ilula kwaye i-rustic, kodwa ixhotyiswe kakuhle. Kukho ikhitshi langoku elinazo zonke izixhobo zokupheka ezisisiseko. Unokuyonwabela i-barbecue kwi-terrace emoyeni ovulekileyo. I-cottage inegadi enefenitshala yegadi ukuze uphumle. Ungantywila kwindawo yokuqubha yendalo ekufutshane nale ndlwana. Kukho indawo yokupaka kwaye unokuza nesilwanyana esi-1 kunye.
Amanzi asendlini angasetyenziselwa ukupheka, ukuhlamba kunye nezindlu zangasese kodwa ayiyo minerali.
Amanzi anezimbiwa osapho aya kuba kwisikhongozelo esineglasi yokukhupha iglasi ekhitshini, xa athe aphela siya kugalelwa simahla.
Uyilo: Umgangatho ophantsi: (Ikhitshi elikhulu(isitovu, iketile yombane, umpheki (izitovu eziringi ezi-4, igesi), ifriji-isikhenkcisi))
Kumgangatho woku-1: (igumbi lokulala(ibhedi ephindwe kabini), igumbi lokulala(ibhedi ephindwe kabini), igumbi lokuhlambela(ibhafu yokuhlambela, isitya sokuhlambela, indlu yangasese, ibhidethi))
i-terrace, igadi (ebiyelweyo, i-300 m2), ifenitshala yegadi, i-BBQ, indawo yokupaka